MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardE Invoice MPT4U My - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT4U application မှ PSTN, ADSL, GSM, CDMA, IPStar နှင့် FTTH service တို့၏ E-invoice ရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ် အား စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။
MPT4U မှတစ်ဆင့် e-invoice များ ရယူခြင်း ဆိုတာဘာလဲ?
လူကြီးမင်းတို့ အသုံးပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှု၏ လစဉ်ကြေး/အသုံးပြုခ ငွေတောင်းခံလွှာ အချက်အလက် များကို ပိုမို အဆင်ပြေ မြန်ဆန်စွာဖြင့် MPT4U Application တွင် ရယူနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာ လက်ခံရရှိသော Postpaid service (PSTN, ADSL, GSM, CDMA, IPStar)နှင့် FTTH သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် MPT ၏ GSM ဖုန်း တစ်လုံး ရှိရုံဖြင့် MPT4U application တွင် E-invoice အား စာရင်းပေးသွင်း ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
MPT4U မှ E-invoice ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာလဲ?
သုံးစွဲသူများသည် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် ၆လစာ ငွေတောင်းခံလွှာ နှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အား ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
ယခင် စာရွက်ငွေတောင်းခံလွှာ များထက် ပိုမိုစောလျင်စွာ နှင့် အချိန်မှန် လက်ခံရရှိနိုင်ခြင်း
စက္ကူအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချနိုင်သည့်အတွက် သစ်ပင်များကိုကယ်တင်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို လျှော့ချရန် ကူညီနိုင်ခြင်း
MPT4U တွင် e-invoice ကို ဘယ်လို စာရင်းသွင်းရမလဲ?
MPT4U ရဲ့ ပင်မစာမျက်နှာ(သို့) ဝန်ဆောင်မှုစာမျက်နှာ(သို့) side menu ရှိ “ အခြားဘေလ်များ” မှတစ်ဆင့် လစဉ်ကြေးငွေတောင်းခံလွှာ ထွက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
MPT4U တွင် e-invoice စာရင်းသွင်းဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
• စာရင်းပေးသွင်းလိုသည့် ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား (Service Type)
• စာရင်းပေးသွင်းလိုသည့် ၀န်ဆောင်မှုနံပါတ် (Service Number)
• ငွေစာရင်းအမှတ် (Account Code)
(၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစား၊ ၀န်ဆောင်မှု နံပါတ်၊ ငွေစာရင်းနံမှတ် များကို သိရှိလိုပါက လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ စာရွက်တွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၏ တယ်လီဖုန်းအခွန်ဌာနများ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။)
MPT4U တွင် E-invoice စာရင်းပေးသွင်းရန်လမ်းညွှန် >>>> Click Here
၁။ E-invoice ရယူပြီး ဘယ်လိုငွေပေးချေနိုင်မလဲ?
ငွေပေးချေမှုအား ယခင်အတိုင်း နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ ၊ စာတိုက်များ ၊ KBZ / CB (Mobile Banking/ Internet Banking) နှင့် အခြား MPT မှ သတ်မှတ်ထားသော တယ်လီဖုန်းဌာနများတွင် ဆက်လက်ပေးဆောင် နိုင်ပါသည်။
၂။ မိမိ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား အခြားသူမှ MPT4U application တွင် e-invoice ရယူနေပါပီဟု SMS လက်ခံရရှိပါသည်။ အခြားလူမှ E-invoice ရယူနေခြင်းအား ကန့်ကွက်လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးဖြေရှင်းပြီးပါက ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
၃။ မိမိ၏ ဆားဗစ်နံပါတ်မှာ အခြား MPT4U အကောင့်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး e-invoice များ ရယူနေပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း မအောင်မြင်ပါက မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း?
၁၀၆ သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးဖြေရှင်းပြီး လူကြီးမင်းအား ပြန်လည် အကြောင်းကြားပြီးနောက် MPT4U တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်။
၄။ MPT4U တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး e-invoice ရယူနေသော ဆားဗစ်များအား ပြန်ဖြုတ်ခွင့်ရှိပါသလား?
MPT4U သုံးစွဲသူသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဆားဗစ်တစ်ခုစီရှိ “ ” သင်္ကေတ ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
၅။ MPT4U application ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ?
MPT4U အက်ပလီကေးရှင်း Android Versionကို လိုတရမှ ဒေတာကုန်ကျမှုမရှိဘဲရယူနိုင်ပါသည်။
Google Play Store နှင့် Apple Store တို့မှလဲ သတ်မှတ်ဒေတာကုန်ကျမှုဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။
Google Play Store: http://bit.ly/2z4ZhrJ
Apple Store: http://apple.co/2yNZJWY
Lo Ta Ya – http://lotayamm.com